ဟားမီးဇ် (ဂရိ: Ἑρμῆς; အင်္ဂလိပ်: Hermes) သည် ဂရိဒဏ္ဍာရီ နှင့် ရှေးခေတ်ဂရိဘာသာမှ အိုလံပတ်တောင် နတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်။ နတ်ဘုရားတို့၏ ရှေ့တော်ပြေး တမန်တစ်ပါးဖြစ်ကာ လူသားတမန်တော်များ၊ ခရီးသည်များ၊ သူခိုးများ၊ ကုန်သည်များ၊ ဇာတ်ထုပ်ဟောဆရာများ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ လူသားကမ္ဘာနှင့် နတ်ဘုရားကမ္ဘာတို့ကြား လျှင်လျှင်မြန်မြန် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနိုင်သူဖြစ်၍ ၎င်းဝတ်ဆင်ထားသော အတောင်ပံပါသည့် ဖိနပ်များအကူအညီဖြင့် ထိုသို့သွားလာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိဉာဉ်များကို မြေအောက် ကမ္ဘာသို့ လမ်းပြခေါ်ဆောင်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
Powell၊ Barry B. (2015)။ Classical Myth (8th ed.)။ Boston: Pearson။ pp. 177–190။ ISBN 978-0-321-96704-6။